ဖိုးညို: March 2015
ကျနော် ဒီကနေည ရွတ်ဆိုမယ့်ကဗျာက၁၉၉၈၊ ဇူလိုင်လ မဟေသီမဂ္ဂဇင်းမှာ ဆရာစည်သူငြိမ်း ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ အိမ်အပြန် ဆိုတဲ့ ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဗျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီ ဆရာစည်သူငြိမ်းက အင်တာဗျူးတခုမှာ ဒီလိုဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။ တနေ့ ထမင်းချက်စားသောက်နေတဲ့ အမေအိုတယောက်ကို သူတွေ့ပါသတဲ့။ အဲဒီအမေအိုဟာ သူစားသောက်ပြီးပေမယ့် ထမင်း ပန်းကန်တချပ်နဲ့ ဟင်းခွပ်တွေကို ဒီအတိုင်းပဲချန်ပြီး ထားတာကို တွေ့ရတယ်။
ဆရာစည်သူငြိမ်းက ဒီလုပ်ရပ်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး အမေအိုကိုမေးကြည့်တော့ ၁၀ စုနှစ်တခုစာလောက် အိမ်ပြန်ရောက် မလာသေးတဲ့ သားအတွက်ဆိုတာကို သိရပါတယ်။ ဘယ်လောက် ကြေကွဲဖို့ကောင်းသလဲဗျာ။ အမေအိုဟာ ဘ၀တခုလုံးလုံး သူ့ရဲ့ဗလာနယ်ဖြစ်ကျန်ခဲ့တဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးကိုဖွင့်ထားတာ၊ ပြန်မလာသေးတဲ့ သားအတွက် ထမင်းဝိုင်းလေး တပြင်ပြင်နဲ့ မျှော်နေတာ၊ ဒါဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ ခေတ်ပြိုင်ရုပ်ပုံလွှာဘဲ။ ဒါဟာ တသီးပုဂ္ဂလ လွမ်းတမှု မဟုတ်ဘူး။ ဗမာပြည်က အမေအများစုကြီးရဲ့ လွမ်းတမှု သင်္ကေတ ဖြစ်ပါတယ်။
သားတွေ၊ သားတွေ အမေတွေရဲ့နှလုံးသည်းပွတ်ထဲက သားတွေ။ တကယ်တော့လဲ ကျနော်တို့ရဲ့မွေးနေ့ဆိုတာ အမေတွေရဲ့ ဝေဒနာရက်စွဲတွေ မဟုတ်လား။ ယောင်္ကျားဖောင်စီး၊ မိန်းမ မီးနေ လို့ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား။ သူတို့ရဲ့ သားတွေ သမီးတွေအတွက် မီးနေခန်းဟာ သင်္ချိုင်းဖြစ်ခဲ့ရရှာတဲ့ အမေတွေ ဒီကမ္ဘာမြေမှာ မရေနိုင် မတွက်နိုင်လောက်အောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ သားဖွားမီးနေဆိုတာ မိန်းမတွေရဲ့ ကံနာဝဋ်နာပါလို့ ဆိုကြပေမယ့်ူ
ကျနော်တို့ကို မွေးတဲ့အခါ ချက်ကြိုးလေးတွေပါလာတယ်။ ဒီချက်ကြိုးလေးတွေကို ဖြတ်တောက် မွေးရာနေရာနဲ့ မနီးမဝေးမှာ မြှေမှုပ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ မူလဇာတိ။ မူလဆိုတာ အ၀ိဇ္ဇာနဲ့ တဏှာလို့တော့ မပြောကြနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ ပဋိစသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းလေ့လာပြီး နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြဖို့ ကြိုးစားကြမယ့်သူတွေမှ မဟုတ်ဘဲ။ လူသားအဆန်ဆုံး အတွေးအားတွေကို ဆေးသားတင်ပေးချင်ကြသူတွေပါ။
အမေတွေ … အမေတွေ စတေးစွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှုတွေနဲ့ အမေတွေ သားဝေးအမေတွေ၊ အမေဝေးတဲ့ သားတွေ ဒင်း ကြမ်းပြည့်နေတဲ့ ဗမာပြည်။ ဒီဗမာပြည်ထဲက သားဝေးအမေတရောက်ရဲ့ အလွမ်းတွေကို ဖွင့်ချထုဆစ်ထားတဲ့ ဆ၇ာစည်သူငြိမ်းရဲ့ - အိမ်အပြန် - ဆိုတဲ့ကဗျာကို ဟောဒီလို ဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာတသန့်တဲ့ … ကမ္ဘာတသန့်ပါတဲ့။ ဒီစကားလုံးကို ဖတ်စက ကျနော် ရုတ်တရက်နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်တော့ ခံစားဖော်တွေနဲ့ အမြင်မလှယ်မှာ သူ့ရဲ့ အလှကို တွေ့လာရပါတယ်။ ကမ္ဘာတသန့်တဲ့ ကမ္ဘာကြီး သန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်သွားတဲ့အထိ ရှည်နေဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်တဲ့။ အမေအိုတွေရဲ့ အမျှော်တွေပါ။ ဇာဘုရင် ဆန့်ကျင်ရေးသမား လူထုဘက်ကကိုယ်စား အဖမ်းခံသွားရတဲ့ သား အတွက် မျှော်နေတဲ့ ဂေါ်ဂီဲရဲ့ အမေ ၀ထ္ထုထဲက အမေရဲ့ အမျှော်တွေ။ စစ်ဖိနပ်အောက်က အဖိနှိပ်ခံ အမေတွေရဲ့ အမျှော်တွေ။ ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်သည့်တိုင် အိမ်ပြန် မရောက်နိုင်သေးတဲ့ သားတွေအတွက် အမေတွေရဲ့ အမျှော်တွေ။
ဘယ်လောက်တုန်လှုပ်ဖို့ကောင်းလိုက်သလဲ။ ဒီကနေ့ဟာ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့။ လွတ်လပ်ရေးနေ့။ ယနေ့တိုင် အိမ်မပြန် နိုင်သေးတဲ့ သားတွေ သမီးတွေ စုစည်းရောက်ရှိနေတဲ့နေ့။ အမျှော်တွေကို ကမ္ဘာကြီးသန့်စင်လာတဲ့အထိ ဆန့်ထုတ်ထားတဲ့ အမေတွေဟာ လွတ်လပ်ရေး ဆိုတာကို ဘယ်လိုနားလည်နေမလဲ၊ ဘယ်လို ခံစားနေမလဲ။ မှောင်မည်း အခန်းကျည်းကလေးထဲက ခေါင်းအုံးအဟောင်းလေးမှာ မှီလှဲရင်း အတွေးတွေ အမျှော်တွေနဲ့ သားရေ … သားရေလို့ မြည်တမ်းနေမယ့် အမေတွေ အလွမ်းတွေ ဆယ်စုနှစ် တခု ကျော်ခဲ့ပါပေါ့လား အမေတို့ရေ။
အဝေးဆိုတဲ့ လက်သစ်တောင်တာ ဂဏ္ဏာန်းသင်္ချာံကို ဆရာစည်သူငြိမ်းက သူ့ရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ - ခရီးအတိုင်းအတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ ဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပိုဒ်ကိုဖတ်ရင်း စကားလုံးတလုံးတိုင်း တလုံးတိုင်းဟာ ပို၍ပိုစွာ ဝေးကွာ … ဝေးကွာ လာခဲ့ရပါတယ်။ - အဝေးရဲ့ အဝေး၊ အဝေးတဖက်မှာ ဝေးရတာကြာ - အချိန်သဘောရော၊ ပထ၀ီသဘောအရပါ ဝေးကွာ နေကြတဲ့ ဒီအမေနဲ့ ဒီသားတွေရဲ့ဘ၀ပါ။ ဒါဟာ ဘ၀နာ တွေပါပဲ။ ဘယ်လောက်တောင် ဝေးခဲ့ကြပါသလဲ။ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဝေးခဲ့ကြသလဲ။ ဟိုး …. မြေပြန့်လွင်ပြင်ကနေ့ ရှမ်းကုန်းမြေမြင့်အထိ၊ နေတောင်တန်းဆီအထိ၊ နယ်စပ်ဒေသတွေကို ရောက်တဲ့အထိ။ အဝေးရဲ့ အဝေး အဝေးတဖက်မှာ ဝေးရတာကြာတဲ့ အဝေးတွေ …။
ကမ္ဘာကြီးသန့်စင်လာတဲ့အထိ အမျှော်တွေကို ဆန့်ထုတ်ထားတဲ့ အမေတွေနဲ့ လူထုဘက်ကကျား ဒီအမေတွေရဲ့ သားတွေရဲ့ အဝေးတွေ။ အဲဒီထက်ပိုမိုဝေးတဲ့ အဝေးတွေလည်းရှိချေသေးရဲ့။ အဝေးတဖက်က အဝေး။ ပညာတက်လို့ လူထင်ခံရမှာ ရှက်တဲ့သားကို - ထွန်းအုံ မင်း ရူးများနေသလား - လို့ မခံစားတက်စွာ ဂရုဏာ ဒေါသော ဆူပြော ပြောရင်း စစ်အစိုးရရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာချက်နဲ့ သေပွဲဝင်ခဲ့ရရှာတဲ့ ရဲဘော်ထွန်းအုံနဲ့ သူ့အမေရဲ့ အဝေး …။ - လူဆိုတာ ကျန်ရင် သေတယ် - လို့ ပြောရင်း သေလို့ အော်လော်ရွာလေးမှာ ချန်ထားခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်တိုက်မောင်းနဲ့ သူ့အမေရဲ့ အဝေး …။ အခုလို လွတ်လပ်ရေးည လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၂ လောက်ကပေါ့။ - သား အိမ်ပြန်မလာနဲ့။ သူတို့ သားကို ဖမ်းကြလိမ့်မယ်။ အမေတို့အတွက် စိတ်ချ။ ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်။ - ဆိုတဲ့ အမေ့ရဲ့ပေးစာလေးကို ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ အနွေးထည် အိပ်ကပ်ထဲထည့်ပြီး ရန်သူ့စစ်ကြောရေးစခန်းက ရရှိလာခဲ့တဲ့ ဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်တွေနဲ့ လွယ်ဖီရဲ့ လက်တဖက်ပေါ်မှာ သေပွဲဝင်ခဲ့ရရှာတဲ့ ရဲဘော်နိုင်မိုးအောင်နဲ့ သူ့အမေရဲ့ အဝေး …. တွေ။
အိုး … အများကြီး … အများကြီး။ ဟိုးးးးးးးးးးးးးးး ဒေါနတောင်တန်းပေါ်မှာ၊ ခွေးအိပ်တောင်ပေါ်မှာ၊ မြောက်များလှစွာသော တောတွေ - တောင်တွေပေါ်မှာ၊ ရန်ကုန်မြို့က လမ်းမပေါ်မှာ၊ ကိုဖုန်းမော် - ညီမလေး ၀င်းမော်ဦး။ အဝေးရဲ့တဖက်ထိ ဝေးခဲ့ကြတဲ့ သားတွေ - သမီးတွေ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဝေးရတာကြာတော့လည်း အာသီသလေးတွေ ရှိလာရတာပေါ့။ အမေတွေက တမျှော်တခေါ် ဆန့်ထုတ်ပြီး မျှော်။ သားတွေကတော့ စစ်ကတုတ်ကျင်းနှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အမေ့အိမ် သီချင်းကို ၅၂၈ ကဝေသံတွေနဲ့ လွမ်းဆွတ်ခဲ့ကြတဲ့ညတွေ အလီလီ အထပ်ထပ်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာတောင်မှ မလွတ်လပ်မှတော့ ဝေးပါရစေတော့ အမေတို့ရေ …။
သား … သား။ ဒီကလေး အလည်လွန်နေပြန်ပြီထင်တယ်။ အခုထိ အိမ်ပြန်မလာသေးဘူး။ အဲဒါကြောင့် သူ့အဖေကြီးက ဆူတာ။ သူတို့သားအဖ နှစ်ယောက် ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီဆိုမှဖြင့် ဒီအမေမှာ ဘယ်လိုနေရမယ်မှန်းကို မသိတော့ဘူး။ ခတ်ပါတယ်။ ဒီသားတယောက်နဲ့တော့။
အို … မဟုတ်သေးပါဘူးလေ။ မဟုတ်သေးဘူး။ သား … ။ သား အိမ်ကထွက်သွားတာ ၁၉၈၈ ကတည်းက မဟူတ်လား။ မဟုတ်ဘူး …။ မဟုတ်ဘူး …။ ဒီပြက္ခဒိန်တွေက အလကား။ ကျုပ်သား အစောကမှ ထွက်သွားတာ။ လမ်းထိမ်မှာ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂစ်တာတီးနေတာဖြစ်မှာ …။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ သွားထိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် …။
- ကျုပ်သားကို အချုပ်ကားနဲ့ လာခေါ်သွားကြတယ်။ သူ့ကို ထောင် အနှစ် ၂၀ ချ လိုက်ပြီတဲ့. –
- သား တောခိုသွားပြီ။ သူပုန်ဖြစ်သွားပြီ။ သားတို့တတွေ တောထဲမှာ ကျောင်းသားတပ်မတော်ဆိုပြီး ဖို့လိုက်ကြသတဲ့။ -
- သား တောထဲက တိုက်ပွဲမှာ ကျသွားပြီတဲ့။ -
- ဆန္ဒပြသူတွေကို ပစ်ကြခတ်ကြတော့ တပ်ဦးက ချီတက်လာတဲ့ သားကို ထိသွားတယ်တဲ့။ -
- သားကို ထောက်လှမ်းရေးတွေက စစ်ကြောရေးမှာ နှိပ်စက်နေကြတယ်တဲ့။ -
မဟုတ်ဘူး …။ မဟုတ်ဘူး …။ မဟုတ်ဘူး …။ သားရှိတယ်။ သား လမ်းထိပ်မှာ ဂစ်တာတီးနေတာ …။ သား လက်ဖက်ရည် ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတာ …။ သား ကျောင်းသွားတက်နေတာ …။ ခဏကြာရင် သား ပြန်လာလိမ့်မယ်။
ဆရာစည်သူငြိမ်းရဲ့ အမေအိုဟာ မျက်ကွင်းတွေတောင် ညိုနေပါပြီတဲ့။ ဒါဟာ အသက်ကြီးသွားလို့လည်း ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အိမ်မရတဲ့ ညတွေများလို့လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ၂ ခုလုံးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီ အမေအိုရဲ့ မျက်ညိုကွင်း ချိုင့်ချိုင့်ထဲမှာ ဘာသာစကားတွေရှိတယ်။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဘာသာစကားတွေ။ ဒီဘာသာစကားတွေကို အခြား ဘာနဲ့မှ ဖတ်လို့မရဘူး။ ရင်နဲ့ဘဲ ဖတ်လို့ရတယ်။
ကျနော်တို့အားလုံး ဒီဘာသာစကားကို တက်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့အားလုံး အမေနဲ့ ဝေးနေကြတဲ့ သားတွေ ဖြစ်ကြလို့ပါပဲ။ မှောင်တဲ့ညတွေ ဖယ်ရှားပေးကြပါ။ အမေအိုဟာ အမှောင်မှာဆို ပိုမိုလို့ နွမ်းလျပေလိမ့်မယ်။ တမ်းတမှုတွေ တနင့်တပိုးနဲ့ အမေအို ရင်ကြိုးရပါလိမ့်မယ်။
အမေအိုရဲ့ ဗလာနယ်အဖြစ် ကျန်ခဲ့တဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးကို ဖွင့်ထားပါတယ်။ အိမ်ခြံဝင်းတံခါးတွေကိုလည်း ဖွင့်ထားပါတယ်။
- သားရေ … သား။ အမေ့ရင်ခွင်ထဲ အပြေးဝင်လှည့်စမ်းပါကွယ်။ သားကို မိထ္ထီလာကန်တော်ကြီးက ဖားတွေ ကောက်လို့ပေးပါ့မယ်။ -
ပရိသတ်များခင်ဗျာ - အဝေးရဲ့ အဝေးမှာ ဝေးရတာကြာပေမယ့် လတ်ဆတ်နေတဲ့ ခံစားမှုတွေဟာ ယနေ့တိုင် စိမ်းလန်းနေဆဲပါ။ ဒါဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ ပြဿနာပါ။ ဒါဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ ခေတ်ပြိုင် ရုပ်ပုံလွှာပါ။
ညနေတိုင်း ညနေတိုင်း ညနေတိုင်တိုင်း
ဆရာစည်သူငြိမ်းရဲ့ ကဗျာပရိယာယ်ဟာ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ရိုးစင်းပြီး ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိလှပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြင်ဖူးနေကြ - ကြားဖူးနေကြ စကားလုံးရိုးရိုးစင်းစင်းတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ သုံးစွဲရင်းနဲ့ ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ ခံစားမှုတွေကို ဖြစ်တည်စေခဲတာ ဒါပါနဲ့ဆို ဒီကဗျာတပုဒ်တည်းမှာတင် ၂ ကြိမ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ညနေဆို သားပြန်လာ မလားရယ်လို့ အမျှော်လေးတဆန့်ဆန့်နဲ့ ထမင်းဝိုင်းကို ယင်ခြောက် ယက်ခတ်နေတဲ့ အမေ။ သူ ရူးနေတယ်လို့ ဆိုကြမလား။ သူ … မရူးဘူး။ ဒါဟာ ဘယ်တော့မှ ရိုးသွားမယ်မဟုတ်တဲ့ သားတွေ သမီးတွေနဲ့ အမေတွေကြားက အလွမ်း။ ငါးပြား ဆယ်ပြားတန် အလွမ်းမဟုတ်ဘူး။ မြင့်မိုရ်တောင်လောက်ရှိတဲ့ အလွမ်းတွေ။ ကြာခဲ့ပြီ။ ကြာခဲ့ပြီ။ ဆယ်စုနှစ်တွေခြားတဲ့အထိ ကြာခဲ့ပြီ။ ကွန်မြူနစ်တွေကပြောတယ်။ ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားမှာ ဆုံးရှုံးစရာဆိုလို့ သံယောဇဉ်ပဲရှိတယ် တဲ့။ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေမှာတော့ ဆုံးရှုံးစရာဆိုလို့ အမေ ပဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရယ် … အဲဒါဟာလည်း တန်ဖိုးကြီးလွန်းလှပါတယ်။
(၄- ၁ - ၂၀၀၂ ရက်နေ့ ABSDF ဗဟိုဌာနချုပ် ဒေါင်းဂွင် တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပထမအကြိမ် စာဆိုတော်နေ့ ဟောပြောပွဲ ခံစားရွတ်ဆိုခဲ့ပ့ါသည်။)
Posted by ဖိုးညို at 3:18 PM No comments:
၀တ်ကောင်းစားလှမရှိတဲ့ … ငါ
ထည်လဲမ၀တ်နိုင်တဲ့ … ငါ
ဘာမှမဟုတ်တဲ့ … ငါ
မြို့ပြကို နောက်ဖေးပေါက်မှဝင်ခဲ့ရ ။
ခ၀ါသည်လက် အပ်ရဦးမယ် ။
မြို့ပြလေ … ။
မြို့ပြဖြစ် ယဉ်ကျေးမှုရနံ့များ ။
ကားရော မြို့ပြပါ တောက် ပြီး
မြို့ပြကို နောက်ဖေးပေါက်က ၀င်ခဲ့ရ။ ။
(မယ်စရင်း ၊ မယ်ဟောင်ဆောင် ဖြတ်သန်းခြင်း ရင်ခုန်ချက်)
Posted by ဖိုးညို at 1:13 PM No comments: